.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: တစ်ဘဝလုံးအတွက်
စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့သူနှင့် ပျင်းရိသူထံတွင် အောင်ပွဲမရှိ ။
♥♪♫သူရိန်လင်း၏ Flash Songs ဆိုဒ်မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်♥♪♫
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီ Flash Song ဆိုဒ်လေးကို လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ
မင်္ဂလာပါနော်..ဒီဆိုဒ်လေးကို Flash Song လေးတွေ နားထောင်ရတာကို ကြိုက်တဲ့သူတွေ
အတွက်ရော Flash Song ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တဲ့ ဝါသနာရှင်တွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး ဖန်တီးထားတာပါ။
ကျွန်တော် အရင်တုန်းကဆို ပျင်းတဲ့အခါ ၊ စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန် ၊ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲမှုတွေ ၊ စိတ်ပျက်
အားငယ်မှုတွေ ၊ တစ်ခါတစ်လေ ဒီလူ့လောကကြီးထဲက ထွက်ခွာသွားချင်လောက်ပါပဲ ။
အဲလိုအချိန်တွေမှာဆို Flash Song လေးတွေ နားထောင်နေတတ်ပါတယ်..
အကြာကြီး မဟုတ်ရင်တောင် တဒင်္ဂ လောက်တော့ စိတ်ထဲမှာ အရာရာကို မေ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းနေသလို
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှု အားသစ်တွေ ရလာမှာပါ ။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း အဲလို ခံစားနေရတဲ့အချိန်ဆို
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီ Flash Song ဆိုဒ်လေးကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..ဒီဆိုဒ်လေးမှာ သီချင်းတွေ
အများကြီးတင်ထားတဲ့အတွက် ကိုယ်နဲ့ခံစားချက်ချင်း တိုက်ဆိုင်မယ့် သီချင်းတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်..
လိုက်ရှာပြီးတော့ နားထောင်ပေါ့နော်..အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ပြီး အရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့
number1kiss@gmail.com 11 December 2012 at 20:24